Vanyori veGalician venguva ino vanofanirwa kuzivikanwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela, Nhema nhema, Zvinotyisa
Ndiri kupedza mazuva mashoma e vacations muRías Bajas ye Galicia. Uye atova makore makumi maviri nerimwe. Ini ndinoda zvese nezvenyika ino uye, hongu, zvinyorwa zvaro futi. Saka, kunyangwe paine akawanda, nhasi ndinoongorora 21 yeiyo vanyori vemazuva ano veGalician mumiririri uye anobudirira. Vari Manuel Rivas, Pedro Feijoó, Manel Loureiro naFrancisco Narla.
(Vigo, 1975). Feijoó akapedza kudzidza kuGalician Philology kubva kuYunivhesiti yeSantiago de Compostela. Akaita zvehunyanzvi semuimbi uye ane basa rakasimba semugadziri uye munyori. Ruzivo rwake rwekutanga, dema mhando uye yakaiswa muVigo uye Pontevedra estuary, Vana vegungwa (Os fillos do mar), aive wekupedzisira weiyo Xerais Novel Prize ya2011 uye yaive chiitiko chekunyora muGalicia.
Nhoroondo yake inotevera ndeye Vana vemoto, uko kwainodzosera mavara kubva kune yapfuura.
Munyori uye gweta, muratidziri paGalicia Televizioni uye munyori. Parizvino anoshanda muDiario de Pontevedra neABC. Iye zvakare anogara achipa kuCadena SER. Nhoroondo yake yekutanga, Apocalypse Z: Kutanga kweMagumo, chinotyisa chinotyisa, chakatanga seInternet blog iyo munyori akanyora munguva yake yekusiya. Tichifunga nezvekubudirira kwayo, yakaburitswa muna 2007 uye ikava mutengesi wakanyanya.
Nhoroondo dzake dzinotevera, Mazuva erima y Hasha dzevakaruramas, Kwaive kuenderera kwekutanga. Asi iro rakabudirira budiriro rakauya kwaari muna 2013 na Mutakuri wekupedzisira, inotyisa inoverengeka ine chinotyisa mweya chikepe semunhu mukuru.
Muna 2015 akaburitsa Kupenya, imwe novel ine nhema uye dzinotyisa tints ane protagonist anotambura tsaona isingazivikanwe yemotokari inomusiya ari pakoma. Mushure memavhiki mashoma, uye mushure mekupora kunoshamisa, zvese zvakachinja zvachose uye mumwe munhu akatanga kuteedzera imba yake nemhuri. Uyezve, anosara aine hunhu hunokatyamadza hwaasina kugona kudzora.
Basa raLoureiro rakashandurwa kupinda kupfuura mitauro gumi uye yakaburitswa muchikamu chenyika.
(La Coruña, 1957). Iri izita renhoroondo refu uye yakabudirira kwazvo. mabvazuva munyori, mudetembi, munyori wenyaya uye mutori wenhau Galician anonyorawo zvinyorwa zveEl País. Iye zvakare mubatsiri wekutanga weGreenpeace kuSpain uye nhengo yeRoyal Galician Academy.
Saina mazita senge pfupi nyaya kuunganidzwa Miriyoni mombe (1989), iyo yakahwina Mubayiro weVatsoropodzi weGalician Narrative. KANA Unodei kwandiri, rudo? , que inosanganisira nyaya yacho Rurimi rwemapururu, iyo iyo director José Luis Cuerda akaenda nayo kumabhaisikopo. Tambo yakaitawo eponymous firimu re Zvese kunyarara, yakadzika nhema nhema yakaburitswa muna 2010.
Basa rake razvino, kubva 2015, ndi Zuva rekupedzisira reNewfoundland, inoverengeka inotaurira nzira yekuSpain kubvira panguva yepashure pehondo uye shanduko kutanga kubva kuchitoro chemabhuku muLa Coruña, kutyisidzirwa nekuvharwa.
Rimwe zita rinopfuura kuzivikanwa. mabvazuva munyori uye mukuru wenhandare yendege akaburitsa zvinyorwa, nyaya, nhetembo, zvinyorwa uye zvinyorwa. Semudzidzisi, akapinda mumaforamu akasiyana, senge kumayunivhesiti uye redhiyo uye zvirongwa zveterevhizheni.
Akachinjika zvakanyanya, zvinomufadza zvinosanganisira kubika, kubhururuka nhunzi, bonsai uye fashoni. Inotsigirawo zvirongwa zvetsika senge Lendaria, yakagadzirirwa kupora, kuchengetedza uye nekuparadzira tsika yemashiripiti yeGalicia.
Muna 2009 akaburitsa bhuku rake rekutanga, ari mbiru Del rye. Muna 2010 zvaive Caja nhema, iyo yakaburitswazve muna 2015. Muna 2012 zvakashamisika nazvo Assur, zita renhau rakakunda ruzhinji nevatsoropodzi, riri rimwe remabhuku anotengeswa zvakanyanya. Iwo mavambo, vicissitudes, uye nzendo dzenherera Assur, akarererwa uye akadzidziswa pakati pemakondo nemaVikings, anoverengerwa akanaka kwazvo muzhizha rino.
Muna 2013 akaburitsa imwe nhoroondo, Ronin, izvo zvakamusimbisa semumwe wevanyori vane hunyanzvi uye vane tarenda remhando iyi munyika medu. Ikoko zvikomo zvinowungudza ndiro rake rekupedzisira nhoroondo nhoroondo, aine hombe uye inoshamisa mhumhi semunhu ari protagonist mune ngano yekuvhima uye kutsiva kwakaiswa munguva yaJulius Caesar. Ehe chave kumwe kubudirira zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori venguva ino veGalician izvo zvinofanirwa kuzivikanwa
Ini ndinoona yega yega inonakidza kwazvo.
Pindura kuda love24
Ngano uye kudyidzana kwenyika: Nyika Isingawanzo, naJhumpa Lahiri